Qaar kamid ah Shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha gudaha oo loo qabtay Siminaar” SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Qaar kamid ah Shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha gudaha oo loo qabtay Siminaar” SAWIRRO”
Siminaarkan oo qabtay 32 kamid ahshaqaalaha Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya ayaa lagu baranayey fahamka iyo horumarinta nidaamka isla maamul-goboleedyadda ee uu qaatay dalka Soomaaliya,dib u heshiisiinta iyo dardargelinta shuruucda nidaamka Federaalka.
Siminarka ay waxaa si wadajir ah u soo gaban qaabiyay Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka iyo hay’adaha Qaramada Midoobay oo kala ah UNDP iyo Xafiiska Siyaasadda ee Qaramada Midoobay ee UNSOM ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaana uu socon doonaa Mudo labo maalin ah sida uu qorshuhu yahay.
Casharadda ay qaadanayaan ka qeybagliyaasha Siminaarka ayaa waxaa bixinayay Macalimiin iskugu jirta Soomaaliya iyo Ajanabi.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka C/fitaax Daahir Mire oo warbaabhinta la hadalay ayaa sheegay in u jeedada Siminaarkan ay tahay dardargelinta shuruucda hanaanka Federaalka maadaama Wasaaradu ay tahay mid u xilsaaran hirgelinta nidaamka Federaalka ee dalka.
Siminaarkan maanta loo qabtay shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka ayaa waxaa uu qeyb ka yahay qorshiyaasha Wasaaradda ay ku doonayso in ay guud ahaan dalka oo dhan gaarsiiso hanaanka Federaalka.
Xiriir noocee ah ayaa dhex mari karaa Muslimiinta iyo Gaalada
Maalinta Qaaxada Aduunka oo Muqdisho lagu xusay” SAWIRRO”